Xigay magnetic - Shiinaha Ningbo Sine
Addoonsi Neodymium Magnet
Qalabka Filter magnetic
Button magnetic biyuhu
Motor Baarlamaanka magnetic
Dareemayaal / Switches Magnet
Xigay magnetic ------- Magnet Joogtada ah ee Golaha A xigay magnetic waxaa inta badan ka kooban rotor dibadda ah, rotor hoose iyo gacmo lagu takooro. qaybaha magnet rasmiga ah, waxaa si dhow ula diyaarin weheliyaan jihada circumferential of rotor gudaha, kuwaas oo foomamka circuit a magnetic riix-jiido ee awoodda. The kala iibsiga xigay magnetic Xuddunta ka mid usheeda dhexe isticmaalaya field magnetic joogto ah. Waxaa isku xira motor wasaaraha iyo mashiinka shaqada oo keliya xoog magnetic. Noocan oo kale ah ...
------ - Joogtada ah ee Golaha Magnet
Xigay A magnetic waxaa inta badan ka kooban rotor dibadda ah, rotor hoose iyo gacmo lagu takooro. Magnet Joogtada ah ee qaybaha ay si dhow u diyaarin weheliyaan jihada circumferential of rotor gudaha, kuwaas oo foomamka circuit a magnetic riix-jiido ee awoodda. The kala iibsiga xigay magnetic Xuddunta ka mid usheeda dhexe isticmaalaya field magnetic joogto ah. Waxaa isku xira motor wasaaraha iyo mashiinka shaqada oo keliya xoog magnetic. Xiriir farsamo noocan oo kale ah jirka kuma saabsana oo xiriir farsamo si toos ah, laakiin ku salaysan dhexgalka magnetism dhexeeya magnet-gudaha.
qabsatooyinka magnetic hubkaas ayaa loo isticmaalaa in warshado ka mid ah: warshadaha biyaha, daawaynta bullaacadaha, batroolka iyo gaaska dabiiciga ah, jiilka awood kaamerada, nidaamka qaboojinta dhexe ee qaboojiyaha iyo kuleyliyaha, warqad iyo saxarka, waraabka beeraha, dhuxul, sibidhka, metallurgy, kiimikada, Dhismaha maraakiibta iyo sidaas on.
Qalabka magnetic ugu weyn ee xigay magnetics
wax Ferrite, iyadoo ay ka faa'iidaystaan ​​isha wax cayriin ballaaran iyo qiimaha jaban, waxaa dadku isticmaalo in laysku xidho magnetic bilowgii. Laakiin ay magnetism daciif Eebay Xuddunta ah yar, kaas oo ku koobnayn ay codsiga.
SmCo iyo alnico, la magnetism ka xoog badan magnet ferrite iyo iska caabin aad u fiican ka dhanka ah daxalka iyo heerkulka sare, waa labada qalabka ku haboon magnetic wax laysku xidho. Si kastaba ha ahaatee, waxaa sidoo kale waa khaladkaasi weyn ee wax SmCo iyo Alnico: sare qiimaha wax cayriin.
Xuduudda ay ferrite, qalabka SmCo iyo alnico boorisay horumarinta qarnigan wax magnet joogto ah saddexaad: magnet arc neodymium magnet NdFeB hadda waa birlabta ugu xoogga badan leh Outreach (Max) ilaa 52 MGOe iyo qiimaha hoose qaraabo la barbar dhigo SmCo iyo alnico birlabta. Magnet Neodymium sidoo kale waa sahlan tahay in la gooyaa oo la qodo, oo ku filan inuu la macmalay galay tirada yar, taas oo waxtar u leh yaraynta mugga laysku xidho.
Iyada oo Faa'iidooyinka xoog magnetic ugu sareeya, qiimaha xad hoose iyo dabacsanaanta ee tirada, magnet neodymium waxaa ugu ballaaran loo isticmaalo wax magnetic in laysku xidho.
Previous: Magnet koolo
Next: Thumbtacks magnetic